Ndakadyisa murume madororo, chikorobho’ – Makuhwa.co.zw
Ndakadyisa murume madororo, chikorobho’
MUKADZI wemumusha weKuwadzana Extension, muHarare, ari kuita kuimba chaiko kumurume wake, achireurura kumupfuhwira kwaakaita.
Hanzi: “Ndakudyisa tsvina yechikorobho, madororo nechipfeko chemukati ndokuzokusunga kuti ushaye basa kuvamwe vakadzi.”
Mukadzi uyu ari kudura zita nekunogara n’anga yaaishanda nayo pakugadzira murume wake uyo waanoti aimushusha zvisina ani akamboona kudzimara “ndamusota zvekusara ave chikorobho chaicho”.
Mudzimai uyu, uyo ane vana vana nemurume wake, anoti akaenda kun’anga yekuGlen View 8, muHarare, nechipfeko chemurume wake chemukati — icho chakanogadzirwa nemishonga yakaiswa tsono ina nezvimwe.
Akazobika zvekudya mushure mekunge apisa mishonga nemarara echikorobho ndokusanganisa nedota racho izvo vakadya vose semhuri.
Chiedza Goneso (35) akaudza Kwayedza pasina kunyara, kuti mweya wekuendera murume wake, Panganayi Chikukwa (39), kun’anga nekumaporofita enguwo tsvuku wakauya apo aigara achirohwa uye “baba ava vaisabvira mumadhirezi”.
Goneso akaitwa hurukuro naye nemusi weChipiri svondo rino apo aive kuchechi yeHouse of Grace International Ministries, iri kuHighfield, iyo inotungamirirwa naProphet Sham Hungwe ndokudonongodza zvose.
Anoti zano rekuenda kun’anga iri akaripihwa nemukoma wake, uyo waanoti airohwawo nemurume.
“Murume wangu aigara achindirova uyewo aizviita shasha yekupfimba vakadzi pfambi. Ndakazotaurirawo mukoma wangu (zita tinaro), uyo aigarawo achirohwa nemurume ndokuwirirana kuenda kun’anga yekuGlen View 8 uko takanoshandirwa kutanga kwegore rakapera.
“Takaenda kun’anga inonzi Dennis Muchemwa, uko ndakanzi ndibvise $20 iyo ndakashaya ndikawana $15 ndokusarirwa nechikwereti che$5.
“Pant (bhurukwa remukati) remurume wangu ndakanga ndaenda naro kare sezvo sisi vangu vakanga vanditaurira zvaidiwa.
“N’anga iyi yakatora kashinda pabhurugwa remukati iri, ndokusungirira tsono ina papant iri – tsono mbiri kune rumwe rutivi nedzimwe mbiri kumwe. Chiremba uyu akadambura jira rake reretso ndokusungira bhurugwa iri mujira racho,” anodaro Goneso.
Anoti n’anga iyi yakazomuudza kuti kana achida kuti murume wake ashaye basa zvachose, anofanira kunoyeredza bhurugwa rake iri muchimbuzi asi kuti ashande kwaari bedzi, anofanirwa kurichengeta mupiro yaasingatsamire izvo akaita.
Anoti piro yaiva nemishonga uyu nechipfeko ichi aigara akaiturika pamusoro pewadhiropu murume wake asina chaanoziva.
Pamusoro pazvo anoti akazoendawo kuchechi yenguwo tsvuku uko anoti akanopihwawo dzimwe mhiko dzekusota Chikukwa.
“Ndaenda kuchechi iyi, ndakanonzi ndiuye nemadororo ehanga uyewo ndotora ivhu remumvuri wake nere pandinge ndimire, ndakaita saizvozvo. Ndokuzonzi ndiunze jira dzvuku apo ndakanyora zvandaida kuitirwa nemurume wangu umo makaiswa ivhu remumvuri wemurume newangu nemadororo ehanga zvikasungwa.”
“Ndakanzizve ndiende nazvo kumba ndinokorobhesa mumba kwemazuva nekuzozvipisa. Dota racho rakanzi ndibikise muriwo kwemazuva manomwe (7) uyo taidya tose inemurume nevana,” anodaro mukadzi uyu.
Anoti akazoshamiswa nezvakanga zvave kuitwa nemurume wake izvo aisanzwisisa.
“Ndakaona kusanduka kwemurume wangu, mumba macho asisakwanise kana bonde kana kufaranuka. Kana kumusha kwake kuHeadlands amai vake vakagumisira vandibvunza kuti akanga aita sei.
“Akazotanga kurwara zvikuru neparutivi asisadye kudzimara tazotsvaga kubatsirwa kuchechi.
“Dambudziko iri risati rauya, ndakaendesa mamwewo madzimai kun’anga iyi nekumuporofita uyu vachinoitirwa zvimwe chete. Mukoma wangu wekundiendesa kun’anga iyi akatosiyana nevarume vaviri nekuda kwemishonga iyoyi.”
Goneso anoti nyaya yekudyisa murume wake mushonga yakazobudira kuchechi yaave kupinda.
“Zvose ndakabvuma kusvikira ndakanotora mishonga yacho kumba murume wangu aripo. Murume wangu akandiregerera mune zvose zvandakaita zvisinei kuti achiri kurwara. Asi ari kubatsirwa,” anodaro.
Goneso anoti akazotumira mashoko kun’anga iyi panhare achiti nyaya yakanga yafumuka nekudaro anoda kuti isunungure mhiko dzayo, izvo yakabvuma.
“Iye zvino nemurume wangu tose tave kunamata. Kurudziro yangu ndeyekuti madzimai kana vaita matambudziko mudzimba nevarume, vasaende kun’anga kana kune vamwe vanozviti vanoshandira asi kuti hatitsvagei Mwari. Ndakapotsa ndauraya murume wangu,” anodaro Goneso.
Mudzimai uyu anoti zvinhu zvinonyadzisa kuti hama dzavo dzekwaNerupiri, kwaGutu, dzinzwe nyaya yakadai iyi.
Prophet Hungwe vanoti vari kubatsira mhuri iyi.
“Vanhu vave kungomhanya kwese-kwese kana vaita matambudziko. Hazvina kusiyana nekunotsvaga sadza remubhini, unoguta ugonwa mvura asi nekufamba kwenguva unozorwara chete,” vanodaro.
Vanoyambirawo varume kuti vagare zvakanaka nemadzimai avo vasingavashungurudze.
Related Topics:chikorobhoNdakadyisa murume madororo
Ndaipinda nemashefu: Pfambi…‘Handizive kwandakawana hiv’…‘Hapana achada kana kundiona
Family wakes up to find five freshly dug graves